Ko kana Apple ikatangisa yakaderera-mutengo vhezheni yeX X muna 2018? | IPhone nhau
Ko kana Apple ikatangisa yakaderera-mutengo vhezheni yeX X muna 2018?
Karim Hmeidan | | dzakawanda
Zvishoma zvasara, anotevera Gumiguru 27 isu tichakwanisa kuwana zvakachengetedzwa zveiyo nyowani iPhone X. Iyo iPhone nyowani inotarisirwa kuvhara kuvhurwa kweiyo iPhone 8 mushure mekuburitswa kwayo munaNovember 3. Tichaona kugamuchirwa kweiyi nyowani iPhone, vaongorori vakati wandei varikutotaura kuti rondedzero yekumirira inogona kusvika mumwedzi unotevera waNdira 2018 asi chaizvo kusvikira zuva rekutanga rasvika hatisi kuzoona stock iyo Apple yakagadzirira pachiitiko ichi.
Asi hongu, vazhinji venyu makaita ne iPhone 8, uye vamwe vazhinji vakamirira kuti vaone kufamba kuri kuita vakomana veblock mune rinotevera gore 2018. Pakupedzisira zvese zvinoenderana nekumirira, hapana anogona kuziva chii chichava kuzosunungurwa mune ramangwanaZviripachena zvichave zvirinani pane zvakaitika kare uye zviri kune wese munhu kumirira kana kwete. Asi, Zvakadii neApple kuvhura yakaderera mutengo iPhone X gore rinouya? Chinhu icho "chemutengo wakaderera" chinonzwika chaizvo, asi chokwadi ndechekuti kune vanoongorora vanoverengeka vanofungidzira kuti Apple ichavhura iPhone X gore rinouya. yakaderera-mutengo.
Iwo musika une tariro nezve Apple kutengesa kwe2018Zvinonzwisisika kuti Apple ichaburitsa iyo iPhone X gore rinouya, iine akasiyana maviri: iyo yekutanga iPhone (pasi pezita rekuvandudza Lisbon) uye yakachipa-inodhura iPhone (pasi pezita rekuvandudza Hangzhou).
Kubva pakuona kwangu, hatina kutarisana nepfungwa inopenga, zvakajairika kuti Apple iri kufunga zvekuvandudza renji mutengo wakaderera yeiyo iPhone, kunzwisisa semuenzaniso mutengo wakaderera iPhone SE (Isu tatoziva kuti yanga isiri yakaderera mutengo). Uye zvakare zvinoita sekunge hazvishamise kwandiri kuti Apple inoiburitsa zvisingatarisirwi sezvayakaita ne iPhone SE, iyo yaisanganisira ese nhau eiyo iPhone 6s Kunze kweiyo 3D Kubata, saka handaizoshamisika kana Apple ikazvirova dundundu neiyo iPhone yakachipa ine zvakawanda zvezvinhu zvitsva zveiyo iPhone X (the FaceID Semuyenzaniso).
Zvino, kunyangwe takapopota kana kwete, isu tinongofanirwa kumirira rinotevera gore 2018 saka tinogona kuona kana vakomana vemuCupertino vafunga kuvhura iyo yakachipa-mutengo iPhone X, chimwe chinhu sezvatinotaura hachina kutorwa kubvira Iyo ingave iyo nzira yekuvandudza iyo SE renji yeiyo iPhone. Tichaona kana Apple ichitishamisa kana kwete ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Ko kana Apple ikatangisa yakaderera-mutengo vhezheni yeX X muna 2018?
Imwe sarudzo yakanaka ingave iri itsva SE SE ine OLED skrini.
Mudiki asi anodheerera.
SaApple, Google inoderedza komisheni yainowana yekunyorera paApple
Mastercard Mberi Implementation yeApple Pay